Zimbabwe country code, 263 phone code, +263 dialing code
Phone country code : 263
ISO code 3166 2A : ZW
ISO code 3166 3A : ZWE
Wich is 263 country code ?
263 country code is Zimbabwe phone code. When you are abroad, and you you want to call Zimbabwe, you need to know Zimbabwe telephone country code before. For example, if you are in France and you want to call Zimbabwe you must first enter France IDD code then Zimbabwe dialing code. The dialing to call Zimbabwe will be the following: 00263 + area + local number.
Zimbabwe phone code ?
Population (2012) : 12,619,600
Inhabitants : Zimbabwean(s)
land : 386,847 km2
water : 1.00 %
land + water : 390,757 km2
government portal : gta.gov.zw
On this page you can find all the information needed to make a phone call from abroad to Zimbabwe. You can also take note of the regional telephone codes for major cities of Zimbabwe as listed below.
Zimbabwe is a country that is located in Africa Its capital is Harare and its inhabitants are Zimbabwean(s). The population of Zimbabwe in 2012 amounted to 12,619,600 people. The surface of Zimbabwe is 390,757 km2.
Zimbabwe cities area codes
AFRIKAANS AF ZIMBABWE +263
263 country code is a phone code that allow you to call Zimbabwe from another country.
Zimbabwe dialing code 263 have to be dialed before the phone number you want to call. On this page you can find instructions needed to call Zimbabwe from another country.